နိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂို လ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ သမ္မတကြီးဦးထင်ကျော်ဟာ – လက်ရှိ ဦးကိုနီ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရတာကို အကြောင်းပြု ပြီး……… – မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ အမြစ်တွယ်စပြု နေတဲ့…ပြည်ဖျက်သမားတွေကို အုပ်စု အလိုက်…အပြီးတိုင် ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပစ်ဖို့…စီစဉ်သင့်ပါတယ် | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeနိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂို လ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ သမ္မတကြီးဦးထင်ကျော်ဟာ – လက်ရှိ ဦးကိုနီ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရတာကို အကြောင်းပြု ပြီး……… – မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ အမြစ်တွယ်စပြု နေတဲ့…ပြည်ဖျက်သမားတွေကို အုပ်စု အလိုက်…အပြီးတိုင် ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပစ်ဖို့…စီစဉ်သင့်ပါတယ်
နိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂို လ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ သမ္မတကြီးဦးထင်ကျော်ဟာ – လက်ရှိ ဦးကိုနီ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရတာကို အကြောင်းပြု ပြီး……… – မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ အမြစ်တွယ်စပြု နေတဲ့…ပြည်ဖျက်သမားတွေကို အုပ်စု အလိုက်…အပြီးတိုင် ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပစ်ဖို့…စီစဉ်သင့်ပါတယ်
နိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂို လ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ သမ္မတကြီးဦးထင်ကျော်ဟာ
လက်ရှိ ဦးကိုနီ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရတာကို အကြောင်းပြု ပြီး………
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ အမြစ်တွယ်စပြု နေတဲ့…ပြည်ဖျက်သမားတွေကို အုပ်စု အလိုက်…အပြီးတိုင် ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပစ်ဖို့…စီစဉ်သင့်ပါတယ်…
ဖယ်ရှားရှင်းလင်း…ပြစ်ဒဏ်ခတ်ရမဲ့သူတွေဟာ…အယောင်ဆောင် ဘုန်းကြီး တွေ…မျိုးချစ်အမည်ခံ…ကလေကချေတွေနဲ့အတူ….စစ်တပ်အသိုင်းအဝိုင်း
(ကာ/ချု ပ် က…ဝီရသူကို ဆွမ်းသွားကျွေးပြီးတဲ့နောက်…ဝီရသူ ခေါင်းပြန်ထောင်
ဒီ အကြမ်းဖက် ကွန်ယက်ကြီးတခုလုံးကို ပိုင်ပိုင် နိုင်နိုင် ကိုင်တွယ် ဖမ်းဆီး
အရေးယူနိုင်ဘို့အတွက်……နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများထံမှ အကူအညီ
အင်တာပိုလ်က လုပ်ကြံမှုတခုလုံးကို မှန်မှန်ကန်ကန် စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ပေး နိုင်မှာပါ…..
အိုင်စီစီကလဲ…..နိုင်ငံတကာက အလိုရှိနေတဲ့ ဂျီ နိုဆိုဒ် တရားခံတွေကို ဝရမ်း
ထုတ် ဖမ်းဆီးပေးခြင်းနဲ့ ကူညီပေးမှာ အသေအချာပါ….
အမှန်ကတော့ လက်ရှိအချိ န်မှာ…ဝီရသူ ဦးဆောင်တဲ့ မျိုးဖျက်အဖွဲ့ဝင်တွေကို
သူတို့ကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့သူ….(မည်သူ့ကိုမဆို) ရာထူးမှ တာဝန်ရုတ်သိမ်း
ဖမ်းဆီး အရေးယူရမှာပါ….(တပ်/ချု ပ်ကြီးဖြစ်နေပါ့စေ)….
ဒီအလုပ်တွေကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် လုပ်နိုင်ဖို့ အတွက်….နိုင်ငံတကာအကူအညီ
ဒီအချိ န် ဒီအခါမှာမှ…လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တဲ့ အလုပ်ကို မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်…..
← ကရင်တိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့သူမတူတဲ့စိတ်ထားရှိသူ စောကျိဝါး(ခ)ဦးနေဝင်းကိုလေးမြတ်စွာဦးညွတ်ပါတယ်
အကြမ်းဖက်သေနတ်သမားဟာ တရုတ်လူမျိုးဟုတ်ရဲ့လား →